Fametrahana sy famoahana milina mpamatsy feeder | YiZheng
Inona ny masinina mitondra sy mamahana?
Fampiasana ny Milina fampidinana & famahanana toy ny trano fanatobiana entana manta amin'ny dingan'ny famokarana sy fanodinana zezika. Izy io koa dia karazana fampitaovana fampitaovana ho an'ny akora lehibe. Ity fitaovana ity dia tsy afaka mampita fitaovana tsara misy haben'ny sombiny latsaky ny 5mm, fa koa ireo fitaovana marobe mihoatra ny 1cm. Izy io dia manana fahaiza-manao matanjaka sy azo ovaina azo ovaina ary fampitaovana tsy miovaova amin'ny fitaovana isan-karazany. Ny fitaovana dia miaraka amin'ny harato manohitra ny famotehana, fitaovana manohitra ny fanakanana ny fivezivezena, fitaovana mifehy ny hafainganam-pandeha miovaova matetika, afaka mahavita fanamiana mitovy sy mifehy tsara ny habetsahan'ny famoahana.
Ampiasaina ny masinina mitondra sy manome sakafo?
Amin'ny maha dingana iray azy, ny Milina fampidinana & famahanana ampiasaina handefasana fitaovana avy amin'ny forklift. Izy io dia be mpampiasa amin'ny fampitana vovoka, granule na fitaovana kely sakana, mazàna azo ampiasaina amin'ny masinina hafa. Izy io dia afaka manatratra ny fanamainana tsy tapaka sy mitohy amin'ny fitsitsiana ny asa sy fanatsarana ny fahombiazan'ny asa amin'ny tsipika famokarana zezika.
1. Ny takelaka slot dia mampiasa takelaka arofanina roa mba hisorohana ny famoahana.
2. Ny rojo mitazona dia manangana rafitra iray izay isarahana ny fitondra entana sy ny fanamafisana, izay manatsara ny fahafahan'ny mpamatsy lovia mahazaka ny enta-mavesatra.
3. Ny fitaovana fanamafisana ny rambony dia omena loharano kapila, izay afaka mampihena ny enta-mavesatry ny rojo miadana ary manatsara ny fiainam-pitaterana ny rojo.
4. Ny mpamatsy lovia rojo dia misy ampahany dimy: ny lohan'ny lohan'ny loha, ny fitaovana kodiarana rambony, ny fitaovana miady saina, ny lovia rojo ary ny endriny.
5. Ny rambony dia manana mpitroka hatairana ho an'ireo mpitroka hatairana, ary ny eo afovoany dia manana fanohanana mitroka fihoaram-pefy manokana hanatsarana ny sakana lehibe. Ny fitaovana dia misy fiantraikany amin'ny fiantraikan'ny roller sy ny takelaka amin'ny alitara amin'ny andaniny roa mba hanatsarana ny ain'ny ampahany mihazakazaka.
Milina fampidinana & famahanana dia mitambatra amin'ny rafitra fandanjana, rafitra fampitana lovia rojo, silo ary fefy iray; izay misy ny lovia rojo, ny rojo, ny pin, ny roller ary ny toy ny mekanika mampita dia mitafy faritra samy hafa tanjaka sy fahita matetika. Ny fiovan'ny akanjo sy rovitra voalohany dia mila fikojakojana sy fanoloana tsy tapaka; ny mpamatsy lovia rojo dia manana fahamendrehana avo lenta ary afaka mizatra amin'ny fitaovana lehibe miaraka amina granularity sasany. Ny haben'ny hopper dia lehibe, izay afaka hanafohezana ny fotoana fisakafoanan'ny forklift, fa miaraka amin'izay dia miadana ny hafainganam-pandehan'ny lovia rojo, mitondra fahaizana lehibe.
Endri-javatra amin'ny milina fampidinana sy famahanana
1. Manana fahaiza-mitatitra lehibe sy elanelam-pitaterana lavitra.
2. Fandidiana azo antoka sy tena mandaitra.
3. Fanapahana fanamiana sy mitohy
4. Ny haben'ny hopper sy ny maodelin'ny motera dia azo namboarina araka ny fahaizany.
Fampisehoana horonantsary mampidina & manome sakafo
Fisafidianana modely ho an'ny milina mpamahana entana
Herin'ny fampifangaroana: 2.2kw
Herin'ny famoahana: fiovam-po matetika 4kw
Teo aloha: Masinina fampifangaroana fampifangaroana disk mitsangana
Manaraka: Masinina fonosana mandeha ho azy